वि.सं. २०७७ फाल्गुन २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल – Sanjal Nepal
Homeराशिफलवि.सं. २०७७ फाल्गुन २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
वि.सं. २०७७ फाल्गुन २४ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
March 8, 2021 admin राशिफल 35949
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व, उत्सव र मुहूर्तादिको विवरण :– २४ गते : आर्यसमाज संस्थापक श्री स्वाी दयानन्द सरस्वती जयन्ती, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, भद्रा करण बिहान ०६।३४ बजेदेखि बेलुका ०५।४४ बजेसम्म, मूहुर्त : कलशचक्र, २५ गते : श्री विजया एकादशी व्रत, त्रिपुष्कर योग बेलुका ०४।२१ बजेदेखि राती ०९।५७ बजेसम्म, मूहुर्त : कलशचक्र, २६ गते : श्री बुधप्रदोष व्रत, मूहुर्त : शिलान्यास (सामान्य), दैलो राख्ने, कलशचक्र,
पर्याप्त धन लाभ हुनेछ । कृषिमा सामान्य र व्यवसायमा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ । अनुकुल समय छ, काममा लागि पर्ने र काम पूरा गरेरै छाड्ने अठोट गरे सफल भइनेछ । व्यापार व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि भइ धन लाभ हुने दिन छ ।
काम बने पनि अशुभ समाचारले मन खिन्न पार्ला । व्यवहारिक चिन्ताले सताए पनि प्रयास गर्दा जटिल कार्यहरु पनि बन्नेछन् । आज आलस्यले पनि सताउला । नँया काममा मन जानाले गरिरहेको काम ओझेलमा पर्ला । तपाईले अरुलाई गर्नु भएको बाचा पुरा हुने दिन रहेको छ ।
फलदायक समय छ । प्रशस्तै आर्थिक लाभ हुनुका साथै प्रेम सम्बन्धमा रमाइनेछ । वित्त आदिको पनि लाभ हुनेछ । आयआर्जनमा राम्रो दिन छ । केहि नयाँ काम गर्नको लागि परिवारजनको राम्रो सल्लाह आउने देखिन्छ । पूजापाठमा ध्यान जाने खालको दिन रहेको छ ।
व्यापार व्यवसायमा नाफा हुने योग छ । धार्मिक सामाजिक काममा संलग्न भइ मन सन्तोष हुनेछ । कमाइ बढ्नाले मन प्रसन्न रहने छ । सन्तानबाट पनि सुखको समाचार आउला । आज गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा बढी मन जाने देखिन्छ ।
वादविवादको सामना गर्नु पर्नेछ । आजका योजना पूर्ण कार्यान्वयन नहुन सक्छन्, परिवारमा झमेला होला । आर्थीक पक्ष ठिकै भए पनि झगडा र डरको सम्भावना रहेकाले सावधान रहनु होला । अनावश्यक वादविवादमा परिएला । विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रेम प्रसंग सुखद रहने छ । विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका पनि छ । मनमा शान्ती मिल्नुका साथै बौधिक कार्यहरु सफल हुनेछन् । चल अचल सम्पत्तिको कारोवार हुन सक्नेछ । वैवाहिक जीवन सुखी हुने खालको दिन छ ।
फसेको पैसा आज उठ्न सक्छ । तपाईंले प्रयास भने गर्नैपर्ने देखिन्छ । साथीभाइले सर सहयोग गर्नेछन् । मनोरंजनको समय रहेको देखिन्छ । तपाईलाई अरुले बढी विश्वास गर्ने खालको समय रहेको छ । पढाइमा पनि प्रगति होला । प्रेममा सुखद मिलनको अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ ।
अध्ययन अध्यापनमा मन लगाउन निकै कठिन पर्ला । खानपानमा नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ । सुखबाट टाढा हुनुपर्ने समय छ । गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । नचाइने ठाँउमा धनको नाश होला । स्वास्थ्यले साथ नदिन सक्छ । यात्राका क्रममा होस राख्नु राम्रो हुनेछ ।
निजी काम बन्ने समय छ । प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ । रोकिएका अधुरा कार्य मिल्ने साथै आँट गरेको कार्य पुरा हुने समय छ । धनजनको पनि लाभ होला । कामहरु आज सजिलैसँग बन्नेछन् । आर्थिक लाभ मिल्ने खालको समय छ, कसैबाट समर्थन पनि पाइएला ।
ईजरायलबाट उदयपुरका अपांग नेत्र आले मगरको लागि आर्थिक सहयोग
आजको राशिफल वि.सं.२०७७ साल मंसिर १५ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर ३० तारिख
November 30, 2020 admin राशिफल 2137
वि.सं.२०७७ साल मंसिर १५ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर ३० तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–पूर्णिमा,१९ घडी
February 19, 2021 admin राशिफल 9351
श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल फाल्गुन ७ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ फेब्रुवरी १८ तारीख माघ शुक्लपक्ष अष्टमी तिथी कृत्तिका नक्षत्र ऐन्द योग भद्रा करण चन्द्रमा मेष राशिमा०८ः२४ बजे सम्म पश्चात बृष राशिमा आनन्दादि योगमा
आजको राशिफल पुष ०६ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
December 21, 2020 admin राशिफल 2496
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व, उत्सव र मुहूर्तादिको विवरण :– ०७ गते : भौमाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, बखुमद, भद्रा करण बिहान ०७।१९ बजेसम्म, मूहुर्त : धनिष्ठा पञ्चकमध्येको एउटा दिन, अग्निवास(सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने
LEX 18 agenda conversation: Job club (541167)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511689)
Hello world! (433339)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395896)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131057)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104069)